Ingenity Mars: njirimara, ihe mejupụtara na mkpa | Network Meteorology
Ikike nke Mars
Ikike nke Mars Ọ bụ helikopta nwere ọgụgụ isi onye ọrụ ya bụ iji gbasaa mbara ala Mars. Naanị ihe dị ka kilogram 1.8, ọ na-eme ka ọ dị mfe ma dịkwa mfe ibufe. Agbanyeghị, ọ nwere nnukwu ọnọdụ ga-eweta nnukwu ọganihu na nchọta ụwa.
N’isiokwu a anyị ga-agwa gị gbasara njirimara, arụmọrụ na mkpa nke Ingenuity Mars.
2 Isi ike Mars isi ike
3 Ike nke Mars Ingenuity
4 Ihe na-akpali mmasị
Ka anyị lee ihe bụ isi njirimara helikopta na-ezube ịga ụwa ọzọ. Ingenbe Marte na - ewepụta teknụzụ ọgbara ọhụrụ nke na - eme ka ọ bụrụ mgbanwe maka nyocha oghere. Ọ dabere na ọrụ nke na-achọ ịnabata ikike ọhụrụ nwere oke oke. Njirimara 4 nke emere ka eriri eriri carbon nke edoziri na rotors abuo nke na agbaghari na uzo emegide gburugburu ọsọ nke 2.400 rpm. Nke a na-agba ọsọ ọsọ ọsọ karịa helikọpta ndị njem na mbara ụwa anyị.
O nwekwara ihe ndị ọhụrụ na-emepụta anyanwụ, batrị ndị dị elu, na ihe ndị ọzọ dị omimi karị. Ọ naghị ebu ụdị ngwa ọrụ sayensị ọ bụla kemgbe Ọ bụ nyocha dị iche na Perseverance nke Mars 2020. Ọ bụ ụgbọelu mbụ iji nwaa ụgbọ elu a na-achịkwa na mbara ụwa ọzọ. Ma ọ bụ na helikopta nke Ingenuity Mars ga-eme mgbalị mbụ na akụkọ ntolite iji kpoo mbara ụwa ọzọ.
Isi ike Mars isi ike
Ihe na - eme ka o siere helikopta ike isi n’elu Mars pụọ bụ ikuku dị gịrịgịrị. Nke a na - eme ka o sie ike ịnweta mbuli zuru ezu. Ma ọ bụ na ikuku nke Mars bụ 99% dị ntakịrị karịa nke ụwa. Nke a pụtara na ọ ga-enwu enwu, yana rotor nke bukarịrị buru ibu ma nwee ike ibugharị ngwa ngwa karịa ihe a ga-achọ maka helikọpta ihe nlere a n'ụwa.
Ekwesịrị m iburu n'uche ọnọdụ okpomọkụ dị na mbara ala. Ọ bụ ihe a na-ahụkarị maka okpomọkụ na mpaghara ụfọdụ dịka nke ọdịda na-adalata ma ọ dịkarịa ala 130 degrees Fahrenheit nke bụ -90 Celsius. Ọ bụ ezie na ndị Ingenuity Mars kwadoro ihu igwe dị ka nke a, a kwenyere na ya kwesịrị ịrụ ọrụ nke ọma dịka o siri chọọ. Oyi ga - eme ka otutu ime helikopta a di elu.
Ọzọkwa, onye na-ahụ maka ụgbọ elu JPL agaghị enwe ike ijikwa helikopta jiri ọystụ. Nkwurịta okwu na-egbu oge bụ akụkụ pụta ụwa nke ịrụ ọrụ ụgbọ mbara igwe gafere ogologo ụzọ etiti. A ga-ebu ụzọ nye iwu tupu oge eruo ma weghachite data injinịa site na mbara igwe ogologo oge mgbe ụgbọ elu ọ bụla gasịrị. N'otu oge ahụ, ọgụgụ isi ga-enwe nnwere onwe dị ukwuu na-ekpebi otu esi efega n'ụzọ ma nọrọkwa ọkụ.
Igwe Ingenity Mars egosila ụfọdụ ụzọ injinịa. Ndị injinia ahụ gosipụtara na ọ ga-ekwe omume ịrụ ụgbọ elu ọkụ nke nwere ike iwepụta oke mbuli na ikuku a dị oke mkpa ma nwee ike ịlanarị na gburugburu ebe obibi. Ha ga-anwale ụfọdụ ụdị dị elu na simulators ohere na JPL. Ndị otu a ga-agụta ihe ịga nke ọma site na nkwụsị iji na-achọpụta ihe ọhụụ a ga-eme.
Ike nke Mars Ingenuity
Ndị ọkà mmụta sayensị ga-enwe ike ịme ememme nke ọ bụla na ngwaọrụ a. Ma ọ bụ na naanị ịlanarị igba egbe ahụ site na Cape Canaveral ma jiri ụgbọ mmiri niile rute Mars na mbara ala ahụ, ọ ga-abụrịrị ihe ịga nke ọma. Ozugbo ị nọ na mbara ụwa na-acha ọbara ọbara, ị ga-eji aka gị kpoo onwe gị site na abalị Martian oyi. Enwere ike iji nke a mee ihe n'ụzọ kwụ ọtọ site na ịdị adị nke ogwe igwe. Ọ bụrụ na helikopta nwere ihe ịga nke ọma site na ụgbọ elu mbụ, a ga-anwale ule ụgbọ elu ọzọ n'ime windo nke ihe dị ka ụbọchị 30 Martian, nke pụtara na ihe dị ka ụbọchị 31 Earthwa.
Ọ bụrụ na ozi a ga-aga nke ọma, nyocha n'ọdịnihu nke mbara ụwa nwere ike ịgụnye oke ikuku. Emere ya iji gosiputa na teknụzụ dị mkpa iji efe na ikuku nwere ike wuo. Ọ bụrụ na ọ ga-aga nke ọma, ọ nwere ike ịhapụ owuwu nke ụgbọ elu ndị ọzọ na-efe efe na-efe efe nke nwere ike ịgụnye na ọrụ robotic na ndị mmadụ na Mars. Ha nwekwara ike ịnye otu ebe pụrụ iche nke ndị na-agba ugwu taa na-enyeghị.
Site na mmepe nke ụdị teknụzụ a, anyị ga-enwe ike ịnye onyonyo dị elu na nnabata maka izu ohi mmadụ, na-enye ohere ịnweta ala nke siri ike maka ndị ọgba iji nweta. Ndị otu niile Ọ gbalịsiri ike iji nwalee ịdị nkọ na mbara ala anyị. Ihe dị mkpa nke ihe a niile bụ ịmụ oge niile ka ọ nwee ike bụrụ ụgwọ ọrụ kachasị mma ma nwee ike ịnabata akụkụ ọzọ maka otu anyị si enyocha ụwa ndị ọzọ n'ọdịnihu.
Ihe na-akpali mmasị
Mars nke Ingenuity ga-adaba na ndagwurugwu a na-akpọ Jezero, oghere dị kilomita iri anọ na ise nke dị n’elu mbara ụwa na-acha uhie uhie na nsọtụ ọdịda anyanwụ nke Isidis Planitia, nnukwu nnukwu bekee nke dị na mgbago ugwu Martian. N'oge gara aga, ugwu a nwere ike ịbụ ebe mmiri na-agba. N’agbata ijeri afọ atọ na afọ anọ gara aga, otu osimiri sọrọ banye n’ime mmiri hà ka Ọdọ Mmiri Tahoe dị na United States ma tinye nsị ndị jupụtara na carbonates na mineral ndị e ji ụrọ kpụọ. Ndị otu sayensị nke Perseverance kwenyere na osimiri ochie a nwere ike ịnakọta ma chekwaa ụmụ irighiri ihe ndị ọzọ na ihe ịrịba ama ndị ọzọ nke ndụ microbial.
Ruo ihe karịrị afọ ise, site na obere obere, usoro ntinye, ndị ọrụ JPL gosipụtara na ọ ga-ekwe omume iwulite ngwaọrụ dị fechaa nke nwere ike iwepụta mbuli zuru oke na mbara ala Mars. Ọ nwekwara ike ịdị ndụ na gburugburu ụwa nsogbu. Ikpeazụ prototype chọrọ anwale ọtụtụ narị elu esiwanye ụdị na JPL ohere simulator. Ọ bụrụ na otu n'ime usoro ndị a ada, ọrụ a ga-ada.
Enwere m olile anya na iji ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere ọgụgụ isi Mars, njirimara ya na mkpa ọ dị maka ịmara maka ụwa niile.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Astron » Ikike nke Mars
Igwe ojii Mammatus